Articles tagged 'youth advocacy for reform and democracy'
'Zanu PF needs to be liberated' 13 June 2016 HARARE - Outspoken former Zanu PF Mashonaland West chairperson Temba Mliswa says it is high time the country's youths rise up and liberate Zimbabwe from the present problems that he said cannot be solved by President Robert Mugabe. Speaking to members of his Youth Advocacy for Reform and Democ...
Mliswa scoffs at Kasukuwere threats 9 May 2016 HARARE - Temba Mliswa, a former Zanu PF bigwig who now leads the Youth Advocacy for Reform and Democracy (Yard) pressure group, has scoffed at threats by Zanu PF political commissar Saviour Kasukuwere to seize his farm. Addressing thousands of Zanu PF supporters at a rally at Chikangwe Stadium...
Yard could turn political party: Mliswa 5 May 2016 HARARE - Former Zanu PF Hurungwe West MP Temba Mliswa, has said he will turn his Youth Advocacy for Reform and Democracy (Yard) pressure group into a fully-fledged opposition political party, if the existing parties fail to accommodate youths. In an interview with the Daily News yesterday, Mli...
Zanu PF youths cause havoc 28 April 2016 HARARE - Rowdy Zanu PF youths almost exchanged blows with members of the Youth Advocacy for Reform and Democracy (Yard) — after they stormed a press conference organised by the Temba Mliswa-democracy advocacy group. Yard yesterday had organised a press conference to ventilate its views on Zanu...
Team Lacoste youths, Mliswa join forces 30 March 2016 HARARE - Four former Zanu PF provincial youth leaders aligned to vice President Emmerson Mnangagwa in the race to succeed President Robert Mugabe have joined forces with the ex-governing party's Mashonaland West chairperson, Temba Mliswa. In a media statement yesterday Mliswa who is the founde...
Push for youth-led party 27 January 2016 MUTARE - Youths here have said they are keen to present a viable political force in the 2018 presidential elections that is strong enough to effectively participate and influence the formal political process. Contributing at a consultative debate organised by the Temba Mliswa-led Youth Advocac...